Imiyalelo yokusebenzisa i-Tabex, yonke indalo iyeke ukutshaya amayeza
Uyisebenzisa kanjani iTabex
Uyisebenzisa kanjani iTabex ukuyeka ukutshaya kwiintsuku ezingama-25
I-Tabex ilawulwa ngomlomo ngokwale shedyuli ilandelayo: Ukuba iziphumo azonelisi, unyango lunokupheliswa kwaye unyango lweentsuku ezingama-30 lunokuphinda luqale emva kweenyanga ezi-2-3. Unyango kufuneka lusetyenziswe ngokungqinelana nale shedyuli ilandelayo:
Usuku 1 ukuya ku-3: 1 ipilisi amaxesha ama-6 yonke imihla kunye nokwehla okufanayo kwenani leesigarethi ezisetyenzisiweyo. Ekupheleni kosuku lwesithathu uzakuthatha umdiza wakho wokugqibela.
Usuku 4 ukuya ku-12: 1 ipilisi rhoqo kwiiyure eziyi-1/2.
Usuku 13 ukuya ku-16: 1 ipilisi qho kwiiyure ezintathu.
Usuku lwe-17 ukuya ku-20: 1 ipilisi imihla ngemihla.
Usuku 21 ukuya 25: 1 ukuya 2 iipilisi imihla ngemihla.
Esi sicwangciso sonyango sihlala inyanga enye, kwaye sinokuphindwaphindaphinda umjikelo weenyanga ezimbini. Abaphandi babonisa ukuba oku kusebenza ngakumbi xa kukho izigulana ezininzi eziyeka ukutshaya emva kweentsuku ezingama-60.
Ukuba utshaya kakhulu kuyacetyiswa ukuba u-odole iipakeji ezimbini, ke ukuba umjikelo wokuqala awuphumelelanga ungaqala kwangoko umjikelo wesibini.
Ukutshaya kunokubangela imvakalelo engathandekiyo kulawulo lweTabex. Isixa sesigarethi esitshayiweyo ngumntu kwiintsuku ezi-3 zokuqala kufuneka sincitshiswe kancinci. Ukupheliswa kokutshaya kufanelekile kungadlulanga umhla we-5 emva kokuqala kwekhosi.
Isebenza njani iTabex ngaphakathi kwengqondo yakho? Izifundo zonyango kwiTabex Malunga noMthi weLaburnum